Lix ciyaaryahan oo kubadda cagta ah oo lagu dhaliilay xilli ciyaareedkan inay qaadanayeen Mushaar qaali ah oo aysan u qalmin!… + SAWIRRO – Gool FM
Lix ciyaaryahan oo kubadda cagta ah oo lagu dhaliilay xilli ciyaareedkan inay qaadanayeen Mushaar qaali ah oo aysan u qalmin!… + SAWIRRO
Byare May 18, 2018
(World) 18 Maajo 2018. Waxaa jira xiddigo kubadda cagta ka dheela oo ku shaqeeya ama jeebka ku shubta mushaar qaali ah, laakiin shaqadooda ka soo dhalaalay oo qabtay waxa u dhigma ama u dhow mushaarka ay kooxahooda ka qaataan.
Haddaba waxaan halkaan hoose idin kugu soo gudbinaynaa lix ciyaaryahan oo kubadda cagta ah oo lagu dhaliilay xilli ciyaareedkan inay qaadanayeen mushaar qaali ah isla markaana shaqadoodu ay aad u yareyd ama u liidatay.
Xilli ciyaareedkan ayaa ah mid gabagabo ah Saxaafadda kubadda cagta ayaana dhinac walba ka eegeysa ciyaartoyda macallimiinta iyo maamulka kooxaha wixii u qabsoomay xilli ciyaareedka dhammaadka taagan.
Taasi waa sababta keentay in bannaanka la soo dhigo lixdaan ciyaaryahan oo xilli ciyaareedkan ku shaqeynayey mushaar qaali ah oo aysan u qalmin, maadaama aysan kooxahooda si fiican u caawin.
Halkaan hoose ka eeg lixda ciyaaryahan ee kubadda cagta oo xilli ciyaareedkan lagu eedeeyey inay qaadanayeen mushaar waali ah oo aysan u qalmin:-
#6 Ousmane Dembele – £220,000 Todobaadkii:
>- Dembele waxa uu kaliya dhaliyey saddex gool 16 kulan oo uu xilli ciyaareedkan u ciyaaray kooxdiisa Barcelona, waxaana arrinta la la yaabay ay tahay in Andres Iniesta oo wiilkaan yar ka shaqo badan uu usbuucii Barca ka qaato £165,000.
#5 Yaya Toure – £220,000 Todobaadkii:
>- Xiddiga reer Ivory Cost ayaa kooxda Manchester City todobaadkii ka qaadanayey lacagtaas waalida ah laakiin inta badan waxa uu ku qaatay kursiga keydka, inkastoo ugu dambeyn uu shaaciyey dhawaan inuu ka fariistay kubadda cagta isla markaana uu ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyey ee Sky Blue.
#4 Alexis Sanchez – £350,000 Todobaadkii:
>- Xiddiga xulka qaranka Chile ayay ku adkaatay inuu noqdo hoggaamiyaha kooxda Manchester United inkastoo uu naadiga yimid xilli ciyaareedka oo meel dhexe maraya, laakiin arrinta aan la aqbali karin ayaa ah in goolhaye David De Gea uu kooxda Man Utd todobaad walba ka qaato £200,000 lagana war hayo howsha adag oo uu u hayo kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford.
#3 Gareth Bale – £350,000 Todobaadkii:
>- Laacibka reer Wales ee Bale ayaa todobaad walba lacagtaas faraha badan u xaadira, inkastoo uusan ahayn dooqa koowaad ee tababare Zidane, haddana waxa uu ka mid yahay xiddigaha kubadda cagta ee ugu mushaarka badan caalamka laakiin wax qabadkoodu uu aadka u yar yahay.
#2 Graziano Pelle – £290,000 Todobaadkii:
>- Pelle ayaa sanadkii 2016-kii aaday horyaalka Shiinaha halkaasoo uu ku qaato lacago uusan u qalmin marka la eego howsha uu u qabtay xilli ciyaareedkan kooxdiisa, waxaana la sheegayaa inay u badan tahay in kooxdiisa Shadong Luneng iska fasaxdo xagaagan.
#1 Oscar – £400,000 Todobaadkii:
>- Ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea ayaa mushaarkaas faraha badan u xaadira todobaad walba, laakiin wax qabadkii laga filayey ma sameynin xilli ciyaareedkan, kooxdiisa Shanghai SIPG ayaana qaati ka taagan bandhiggiisa aan wacnayn iyo lacagaha uu qaadanayo oo aan isku qalmin.
Arsenal oo diyaar u ah inay 75 milyan ku qarash-geyso saddex saxiix ka hor inta aysan Mikel Arteta u magacaaban macallinkeeda cusub
“Waxaan ku dhawaaday inaan ka fariisto kubadda cagta, kadib marka ay hooyadey xanuunsatay”